Shacabka Soomaaliyeed oo soo dhaweeyay booqashada uu dalka ku imaanayo Madaxweynaha Turkiga – Radio Muqdisho
Shacabka Soomaaliyeed oo soo dhaweeyay booqashada uu dalka ku imaanayo Madaxweynaha Turkiga
Shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa si weyn u soo dhoweeyey una diyaar garoobay booqashada maalina Axadda ah uu caasimadda ku imaanayo Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdoğan.
Qaar ka mid ah shacabka ku nool degmooyinka Gobolka Benaadir oo la hadlay Warbaahinta Qaranka, iyaga oo ku sugan meelo kala duwan oo ka mid ah caasimadda ayaa sheegay inay aad ugu faraxsanyihiin booqashada maalinta berri uu Muqdisho ku imaanayo Madaxweyne Raccep Tayyio Erdogan, iyagoo tilmaamay in uu ahaa mas’uul ay abaal u hayaan shacabka Soomaaliyeed meelkasta oo ay joogaan.
Qaar ka mid ah dadkii la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa yiri “Shalay waxa uu na soo booqday anaga oo ku jirno xaalad adag oo ah abaar iyo macluul, runtii waxa uu dunida tusay in Muqdisho la soo booqan karo, maanta isaga oo Madaxweyne ah in uu na soo booqdo sharaf weyn ayay noo tahay, mashaariic kala duwan ayuuna u horseeday in dalka laga hirgeliyo, runtii annaga farxad weyn ayay noo tahay, waayo wax weyn ayuu dalka ka hirgeliyay, aniga shacabka Soomaaliyeed ee walaalaheyga ah waxaan ugu baaqayaa inay muujiyaan dulqaad inta lagu guda jiro soo dhaweynta Madaxweynaha Turkiga oo ay xiranyihiin waddooyinka qaarkood, si aan u ilaalino sharafka shacabka Soomaaliyeed iyo kan Qaranka”
Sidoo kale Shacabka ku dhaqan magaalada Baydhaba ee xarunta gobolka Baay, ayaa soo dhoweeyey booqashada Madaxweynaha Turkiga uu ku imaanayo magaalada Muqdisho maalinta berrito ah, iyagoo ka codsaday shacabka inay tixgeliyaan hay’adaha amniga ee ku shaqada leh sugidda Nabadgelyada si looga hortago dhagarta ay maleegayaan maleeshiyaadka argagixisada ah ee Al-shabaab.
Sidoo kale shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobollada dalka ayaa booqashada Madaxweynaha Turkiga ku tilmaamay in ay tahay mid taariikhi ah, isla markaana aysan Ummadda Soomaaliyeed lloobi doonin waxqabadka dowladdiisu ay sameysay shacabka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha dalka Turkiga mudane Raccep ayaa 19-kii August ee sanadkii 2011-ka booqasho ku yimid Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho isagoo xilligaasi ahaa Ra’iisul wasaaraha Turkiga, waxaana tani ay u noqoneysaa markii labaad oo uu dalka booqasho ku yimaado, isagoo lagu wado in xariga uu ka jaro mashaariic horumarineed oo ay dowladda Turkiga ka hirgelisay caasimadda.
Madaxweynaha Turkiga oo Mashaariic Horumarineed ka hirgaliyay Jabuuti